Kitra – «Super coupe d’Europe»: resy ny Real de Madrid vao tsy nisy CR7 sy i Zidane | NewsMada
Référendum: les débats s’animent ...avril 23, 2019
Fetin’ny Paka: olona roa maty, 125 ireo narary nentina Hopitaly ...avril 23, 2019
Kitra – «Super coupe d’Europe»: resy ny Real de Madrid vao tsy nisy CR7 sy i Zidane
Par Taratra sur 17/08/2018
Manomboka mivaralila ny Real de Madrid, amin’izao fotoana izao. Miseho lany sahady ny tsy fahombiazana, eo amin’ny fifaninanana, atrehiny. Votsotra ny “super coupe d’europe”, satria resin’ny Atletico de Madrid, ry zalahy.
Tsy namokatra ny Real de Madrid, vao nilaozan’ireo kalaza tao aminy dia i Zidane, mpanazatra sy i Ronaldo, mpamono baolina. Lavon’ny Atletico de Madrid, ry zalahy, nandritra ny fiadiana ny “super coupe d’europe”, taranja baolina kitra. Fihaonana notanterahina ny alarobia lasa teo, tao amin’ny kianja A. Le Coq Arena, any Estonia. Marihina fa lalao nikatrohan’ny ekipa tompondaka sy ny nahazo ny Europa ligue. Niondrika tamin’ny isa 4 no ho 2 ny Real, tamin’ity.
Niady ny fihaonana satria efa tany amin’ny fanalavam-potoana vao tafavoaka ho mpandresy ny Atletico. Na izany aza, ry zareo no nanokatra ny isa, vao nanomboka 1 mn monja ny fihaonana. Baolina tafiditr’i Diégo Costa.
Tsy nihafihafy anefa ny Real na tsy teo aza i Ronaldo. Mbola naneho ny fahaizany i Gareth Bale, nanolotra ny baolina ho an’i Benzema, ka namono izany, teo amin’ny minitra faha-27. Tsy nijanona teo fa mbola nitohy izany fahombiazana izany ka nitarika tamin’ny isa 2 no ho 1 ny Real, teo amin’ny minitra faha-63, taorian’ny “penalty”, tafiditr’i Ramos, rehefa nandray tanana tao anaty faritra tsy azo ivalozana, i Juanfran. Betsaka ny nihevitra teo fa tsy hahatohitra ny Real intsony ny Atletico. Tafaporitsaka indray anefa i Diego Costa, tany amin’ny minitra faha-79, nanasahala ny isa teo amin’ny roa tonta.
Niroso tany amin’ny fanalavam-potoana
Tsy nisy intsony ny baolina maty taorian’io ka voatery niditra teo amin’ny fanalavam-potoana. Tsy nahatosika ny Atletico intsony nanomboka teo ny Real ka nisesy ny baolina tafiditra. Mbola nanampy izany, i Saül Niguez, teo amin’ny minitra faha-98 sy ny an’i Koke Resurreccion, tany amin’ny 6 mn tsy hiravana.
Hita ny fahabangana teo amin’ny tsy fisian’i Zidane, amin’ny fandaharana ireo mpilalao sy ny fahaizana manolo izany ao anatin’ny fihaonana, ary ny tena lesoka ny tsy fahampian’ny mpamono baolina, anisa’ny nampiavaka an’i Cristiano Ronaldo.
Club Soroptimist International Mandrosoa Sensibilisation cancer du sein aux étudiantes Université ACEEM Manakambahiny 11 Avril 2019 #Photo 23/04/2019
Bureau National de Gestion de Risques et Catastrophes passation de pouvoir entre le directeur sortant Tovo Venty et le directeur exécutif entrant E Andriakaja 12 Avril 2019 Antanimora #Photo 23/04/2019
Référendum: les débats s’animent 23/04/2019
Fetin’ny Paka: olona roa maty, 125 ireo narary nentina Hopitaly 23/04/2019
Tsy voahaja ny zon’ny ankizy: voatery manivana volamena ireo mpianatra ao Dabolava 23/04/2019